Alahady 29 Septambra 2019 - FJKM Amparibe Famonjena
Alahady 29 Septambra 2019
Alahady 29 Septambra 2019 Alahadin'ny Sampana Mpitaiza Tanora
« Lazaiko aminareo marina tokoa: Na aiza na aiza amin'izao tontolo izao no hitoriana ity filazantsara ity, dia holazaina koa izay nataon-dravehivavy mba ho fahatsiarovana azy. » (Matio 26:13)
Alahady farany nibanjinana ny lohahevitra « Manompoa ny Tompo amin’ny fahamasinana » androany ary natokana itondrana am-bavaka ireo sampana mitaiza tanora. Vatsy RAKOTONARIVO filoha lefitry ny SaMpaNa Mpiangaly Zavamaneno no nitarika ny fotoana ary ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitondra ny hafatra. Ny Matio 26,6-13 no tenin’Andriamanitra nangalana ny toriteny.
Ny Salamo 47,1-9 no novakiana ho fiderana sy fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra. Taorian’izay dia nohiraina ny hira fanevan’ny faha 200 taonan’ny FJKM.
Esory aminareo ny fo lentika rehetra sy ny fahavinirana sy ny fahatezerana sy ny fitabatabana sy ny fitenenan-dratsy ary ny lolom-porehetra…
Ary tsrarovy ny Mpanao anao amin’ny andro fahatanoranao…
Fa mandosira ny filan’ny tanora fanahy…
Tao ahorian’ny anambarana ny sitrapon’Andriamanitra dia nohiraina ny FFPM 1,1
Noho ny tsy fahatanterahana nanoloana ny sitrapon’Andriamanitra dia natao ny vavaka fifonana sy fangatahana famelan-keloka tamin’Andriamanitra. Nangatahina ihany koa ny Fanahy Masina mba hitahiry ireo zanak’Andriamanitra mba hadio saina sy fo ary ho tsara fanahy.
Izay nandre ny teniko ka mino Izay Naniraka Ahy no manana fiainana mandrakizay, ka tsy hohelohina.
Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao : Nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay.
…Fa amin’ny anarany no hahazoan’izay rehetra mino Azy famelan-keloka.
Tahorian’ny famelan-keloka dia nohiraina ny FFPM 543,1-3
Rehefa vita ny hira dia niaraha-nanonona ny Fanekem-pinoana laharana voalohany.
DIMY MINITRA HO AN'NY SEKOLY ALAHADY
RAKOTOHARISOA Michel no tompon’anjara tamin’ny dimy minitran’ny Sekoly Alahady.
Ny Joba 22,21a no andalan-tSoratra Masina nangalana ny hafatra.
« Mifankazara amin’ny Tsitoha dia hiadana ianao. » Mba ananantsika fiadanana dia mandidy antsika Andriamanitra mba hanana fifandraisana akaiky Aminy. Fony fahakeliny i Michel dia isaky ny fotoan-dehibe ihany vao mandeha anya m-piangonana (Martsa, Mey, Septambra). Rehefa lehibebe izy dia niditra sampana ka nihatsara izany fifankazarany tamin’ny Tompo izany manatrika ny fivorian’ny sampana misy azy izy rehefa Mardi, Mercredi ary Samedi
Noho ny fitaizana azony dia nihatsara hatrany ny fifandraisany tamin’ny Tompo ary mivavaka izy Matin, Midi Soir. io no fifandraisana tena tsara amin’Andriamanitra ahazoana fiadanana. Apetraka eo am-pela-tanan’Andriamanitra ny fiainana amin’ny fotoana rehetra.
Nambara tamin’ny Tompo ny fanirian’ireo ankizy sy tanora hiray lalana Aminy. Nangatahana ny Tompo mba tsy hahafoy ny mpanompony hananan’izy ireo fiadanana.
Tahorian’izany vavaka izany dia nohiraina ny FF 52
NY RAHARAHAN'NY FIANGONANA
Nampahafantatra ny « Librairie Antso » fa maro ireo fitaovam-pianarana azo jifaina ao aminy
Nampahafantarina ny fiangonana ny Lasy Jobily faha 25 taonan’ny SAMPATI FJKM foibe izay ho tanterahina any Fenerive Est ny 6 Oktobra ka hatramin’ny 16 Oktobra 2019.
Nampahafantatra mahakasika ny fivoriam-be izay ho tontosaina ny 12-13 Oktobra any Antsapan’i Mahazo ny Synoda Antananarivo Andrefana.
Nambara fa anio dia Alahady natokana itondrana am-bavaka ireo Sampana mitaiza tanora.
Nambara ihany koa ny fisian’ny asa fampaherezana ao ahorian’ny fanompoam-pivavahana.
Namafisina ny fitohizan ‘ny famakiana ny bokin’i Jaona.
Nampatsiahivina ny mpianakavin’ny finoana fa alahadin’ny Mpitandrina ny 6 Oktobra. Ankalazaina amin’io andro io ny faha telopolo taonan’ny naha-Mpitandrina an’Andriamatoa RAHARIJAONA Solofonirina ankalazaina amin’io andro io ihany koa ny fahactelopolo taonan’ny fanambadian’izy mivady.
Nambara nandritry ny filazan-draharaha ny fotoana mandritra ny erinandro anisan’izany ny fampianarana Soratra Masina Alarobia ariva, ny fotoam-bavaka Zoma ariva ary ny maraim-baovao Sabotsy maraina.
Nambara ny tatitry ny vola.
Notononina ireo fiantsoana avy amin’ny sampana, sampan ‘asa sy asa ary vaomiera.
Nisaorana ireo tompon’Andraikitra nanatontosa ny fotoana anio
Nisaorana ihany koa ireo rehetra nandray anjara tamin’ny fanatontosana ny fankalazana ny fankalazana ny faha 30 taona nitandreman’ny Mpitandrina sy faha 30 taonan’ny fanambadiany.
Nandritry ny fandraisam-pitenenan’ny Mpitandrina no niarahabana ireo zanaky ny fiangonana nahavita ny fanamasinana ny fanambadiany.
Tamin’izany dia notrotroina am-bavaka ny tokantrano vao.
Fampahafantarana ny bokin’i jaona :
Ny bokin’i Jaona dia natokana ho fiarovana ny fampianarana ny momba an’i Jesoa.
Efa saika tsy hanoratra i Jaona fa noho ny fipariahan’ny fampianaran-diso dia nanoratra ihany ny tenany.Tao amin’ny nosy Patmo no nanoratan’i Jaona ny filazantsaran’i Jaona sy ny bokin’i Apokalipsy.
Manambara ny maha Andriamanitra an’i Jesoa ny toko telo voalohany ao amin’ny filazantsaran’i Jaona. Ny filazan-tsaran’i Jaona ihany koa dia mampiseho ny fitiavan’Andriamanitra.
Araka izany dia mizara roa io boky io ;
Ny toko roa ambinifolo voalohany dia Mitantara ny fanambaran’i Jesoa ny fanjakan’Andriamanitra amin’ny vahoaka ;
Ny tokoanankisivy manaraka kosa dia mampiseo an’i Jesoa midinika manokana amin’ny mpianany.
Teo am-pamaranana ny fandraisany fitenenana dia nanentana ny mpianakavin’ny Tompo ny Mpitandrina hanohy ny famakiana ny filazantsaran’i Jaona.
RANAIVOSON Jacky no nanatontosa ny rakitra sy fanomezana
Hira : FFPM 25,5 / FFPM617, 1 / FF12,1 / FF15,1 / FFPM 630,2 / FFPM 547 , 4 / FF 48 / Misaotra Anao izahay
Fisaorana sy raki-boady :
Fisaorana noho ny tombon’andro, fisaorana noho ny fitsingerenan’ny taonan’ny fanambadiana, fisaorana noho ny asa, vavaka ho an’ny fahasalamana, vavaka ho an’ny fianarana.
Fanolorana ny rakitra :Teo am-panolorana ny rakitra dia noventesina ny FFPM437,1
Ezekiela 20,39-44, Matio 26,6-13, Heb 12,25-29 no perikopa androany. Nialoha ny vakiteny dia nohiraina ny FFPM 241, 1-3
Vavaka mialoha ny vakiteny : Nisaorana ny Tompo noho ny fahafahana mihaino ny hafany, nangatahina ny Fanahy Masina mba hiasa mandritry ny fandraisana ny hafatry ny Tompo.
Natao izao fotoana natokana ho an’ny Sampana mitaiza tanora izao mba hampiray ireo tanorantsika sy mba anentanana ireo tanora tsy mbola anaty sampana mba hiditra any amin’ny sampana manandrify azy.
Ny Matio 26,6-13 no tenin’Andriamanitra nangalana ny toriteny.
Mahakasika ny nanosoran-dravehivavy ny tongotr’i Jesosy tao an-tranon’i Simona boka ity andalan-tSoratra Masina ity.
Mizara telo ny toriteny anio.
Voalohany dia ny nataon’dravehivavy tamin’i Jesoa
Faharoa dia mahakasika ny fihetsik’ilay mpianatra nanoloana ny fanosoran-dravehivavy ny tongotr’i Jesosy
Farany dia aseho amintsika ny fankasitrahan’i Jesoa ny fihetsik’ilay vehivavy.
Ao amin’ny Jaona 12,3 dia i Maria ilay vehivavy ao amin’ny andininy faha efatra kosa no manambara fa i Jodasy ilay mpianatra nanome tsiny ny fihetsik’i ravehivavy.
Zava-tsoa no nataon’i Maria tamin’i Jesoa, fanehoany ny fitiavany an’i Jesoa izany ary nambaran’i Jesoa fa fanomanana ny fandevenana Azy ny fanosoran’i Maria menaka Azy. 300 Denaria no tombam-bidin’ilay menaka ; izany hoe raha amahanana olona 5000 isa dia mbola misy ambiny 100 Denaria.
I Jodasy dia anankiray tamin’ny mpianatr’i Jesoa. Izy dia efa fantatr’i Jesoa hatry ny voalohany fa hamadika Azy ary zanaky ny fahaverezana. Nanoloana ny fanomezam-boninahitra nataon’i Maria an’i Jesoa dia tsy faly Jodasy ka nanome tsiny an’dravehivavy sy Jesoa. Nambarany tamin’izany fa raha nanaovana asa soa ny vidin’ilay menaka dia nahavitana zavatra goavana.
Fantatr’i Jesoa ny tany am-pon’i Jodasy ary tsapany ihany koa ny alahelon’i Maria. Nanoloana izany dia hoy Izy « Ny malaelo dia eto aminareo mandrakariva fa Izaho tsy mba ho eto aminareo mandrakariva ».
Araraoty ny fotoana omen’ny Tompo anao anaovanao ny fanompoana masina. Aza miandry fotoana fa tontosay amin’izao fahatanoranao izao ny fanaovana ny asan’ny Tompo. I Jaona no mpianatry ny Tompo zandriny indrindra ; eo amin’ny 18 na 20 taona teo izy no nanaraka ny Tompo. Tsy ny tanora ihany fa isika rehetra, atolory ny Tompo ny fiainanao manontolo.
Tamin’ny fotoana nitrangan’ity tantara ity, ho fitsinjovan’ny olona ny vodiandro merika dia amin’ny alalan’ny fividianana zavatra sarobidy no anaovan’ny olona tahiry na « épargne » ; ary rehefa tongan y fotoan-tsarotra dia iny zava-tsarobidy iny no amidy mba ahafahana miavotra. Ny an’i Maria dia tamin’ny alalan’ilay menaka larda tsara tahiry tao anaty tavoara alabastara no nametrahany izany « épargne izany ». Rehefa nifanena tamin’i Jesoa anefa izy dia foiny ho an’i Jesoa izany tahiry sarobidy iankinan’ny ampitsony izany. Ianao ihany koa aza manana ahiahy fa atolory ny Tompo ny fiainanao manontolo ; ny ankehitrininao, ny ampitsonao dia atolory Azy manontolo.Amin’izao fotoana iafaran’ny fibanjinana ny lohahevitra « Manompoa ny Tompo amin’ny fahamasinana » izao dia ianaro izay nataon’i Maria ary alaviro sy fadio ny maka tahaka an’i Jodasy.
Ireto no hira nangatahan’ny vahoakan’Andriamanitra nanao izany: FFPM 20: 1 / FNisaorana ny Tompo noho ny fampianarany. Nangatahina ny Tompo mba ho tanteraka amin’ny Mpianakavin’ny finoana ny tenin’Andriamanitra vao avy nozaraina. Nentina am-bavaka ny fiangonana sy ireo rehetra manana andraikitra amin’ny fiangonana mba hahavita be amin’ny asan’ny Tompo indrindra fa ny famerenana ireo ondry mania sy izay any ivelan’ny vala. Nentina am-bavaka ihany koa ny mpianakavin’ny finoana eto Amparibe Famonjena mba hahatahiry ny tenin’ny Tompo. Nentina am-bavaka ny asan’ny Tompo mandritry ny erinandro. Nentina am-bavaka ireo tanora any anaty sampana, ny sampana misy azy ary indrindra ireo tanora mbola tsy tafiditra any anaty sampana. Nentina am-bavaka ireo mpianatra katekomena ho raisina mpandray ny fanasan’ny Tompo amin’ny volana Novambra. Nentina am-bavaka ireo mpanala fanadinana, ny sahirana, ny tsy salama, ny mana-manjo, ny azon’ny tsindry hazolena sy ireo tratran’ny tsy fidiny. Nentina am-bavaka ihany koa ireo manana hataka manokana. Notrotroina am-bavaka ny filoha foiben’ny FJKM, ny Sekretera Jeneraly, ny Tonian’ny departemanta sy ny mpiara-miasa rehetra ahavita tsara ny asany sy ny anjara fanompoany ka ho tonga vavolombelon’i Jesoa Kristy eto Madagasikara sy manerana izao tontolo izao. Nentina am-bavaka ihany koa ireo nanatontosa voady masina sy raki-pisaorana.
Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo ny vavaka fangatahana.F 41 : 1/ FFPM 2:1 / FFPM 242 : 1 / FF48: 1.
– Tao ny nisaotra an’Andriamanitra fa lafo ny tranony
– Tao ny nisaotra an’Andriamanitra fa afaka fanadinana
– Tao ny nangataka amin’ny tompo ny hitahiana ny zanany
– Nisy ny mpianakavin’ny finoana tonga mandalo eto an-toerana ka misaotra an’Andriamanitra
Rehefa natolotra ireo voady dia notanterahina ny rakitra ka natao ho fanolorana izany ny hira 275 : 1 “Raisonao ry Tompo soa”
Mialoha ny vavaka ho amin’ny soratra Masina dia natao ny hira 175: 1, 5 “Avia Fanahy o!”
Teo am-pamaranana dia nohiraina ny FFPM 539,1 ; Niaraha-nanonona ny tondrozotra ;
Natolotra ny tso-drano ; Ary nohiraina ny FFPM 539,2
Nitarika ny fotoana : RAKOTONARIVO Vatsy
Nitory ny tenin’Andriamanitra : RAHARIJAONA Solofonirina
Mpitendry orgue : RABIAZAMAHOLY Hery Lanto sy mpitendry zavamaneno
Tompon’andraikitry ny fafana : RABIAZAMAHOLY Mahery
Tompon’andraikitry ny fanamafisam-peo : Rajaonarison Lanto
Naka ny sary RAHARIJAONA Nirina
Dimy minitran’ny Sekoly Alahady : RAKOTOHARISOA Michel
Nandray an-tsoratra : ZANAHARITSIMBA Toky Noely Tiana